July 2020 - Myanmar Sports Villages
ပီယာလို လက်သစ်ကို ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည့် အင်တာမီလန်
အင်တာမီလန်အသင်းဟာ ပီယာလိုလက်သစ်လို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဘရက်စီယာ ကွင်းလယ်လူ ဆန်ဒရို တိုနယ်လီကို ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ အသက် ၂၀ အရွယ် တိုနယ်လီကို အင်တာမီလန်အသင်းဟာ ကနဦး အဌားဖြင့် ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီး နောက်နှစ်မှ အပြီးသတ်ဝယ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှုရယူထားခဲ့ပါတယ်။ အဌားပြောင်းရွှေ့ကြေးကို မဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် အဌားသီးသန့်အတွက် ယူရိုငွေများစွာ ပေးချေခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီအကုန်မှာတော့ အင်တာမီလန်အသင်းဟာ တိုနယ်လီကို ယူရို ၃၅ သန်းဖြင့် အပြီးသတ်ခေါ်ယူဖို့ ယခုသဘောတူညီချက်ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ တိုနယ်လီဟာ အင်တာမီလန်အသင်းမှာ တစ်နှစ်ကို လုပ်ခလစာ ယူရို ၂.၅ သန်းအထိ ခံစားခွင့်ရရှိမယ်လို့ သိရပြီး ၂၀၂၄ အထိ စာချုပ်ချုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လာမည့်တနင်္လာနေ့မှာတော့ စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စကို အဆုံးသတ်ဖို့အတွက် မီလန်မြို့သို့ တိုနယ်လီသွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တိုနယ်လီဟာ ဘရက်စီယာအသင်းနှင့်အတူ ယခုရာသီမှာ ၇ ကြိမ် ဂိုးဖန်တီးမှု...
ဘိုင်ယန်ကစားသမားကို အပြိုင်ကမ်းလှမ်းကာ ခေါ်ယူသွားမည့် ချယ်လ်ဆီး နှင့် မန်စီးတီး
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရော၊ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းပါ နောက်တန်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။ (၂) သင်းစလုံးရဲ့ မဖြစ်မနေ အင်အားဖြည့်တင်းနေရာကို ထောက်ပြပါဆိုရင် ဗဟိုခံစစ်မှူးနေရာတွေပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း ဈေးကွက်အတွင်းမှာ ဗဟိုခံစစ်မှူးနေရာအတွက် (၂) သင်းစလုံးက ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် နောက်ခံလူ အလာဘားကို ချယ်လ်ဆီးနှင့် မန်ချက်စတာစီးတီးတို့က ခေါ်ယူဖို့အတွက် စောင့်ကြည့်လျက်ရှိပါတယ်။ အလာဘားဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ စာချုပ်နောက်ဆုံးနှစ်ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည့်အတွက် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာ အလာဘားကို ရောင်းချဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ အလာဘားဟာ ဗဟိုခံစစ်မှူးနေရာအဖြစ် ဘယ်အစွန်နေရာပါ ပြောင်းလဲကစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် လမ်းပတ်ရော၊ ဂွာဒီယိုလာအတွက်ပါ စိတ်ကြိုက်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာတော့ မန်စီးတီးထက် ချယ်လ်ဆီးက ပိုပြီးအလေးသာလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းဟာ မနေ့က ဘုန်းမောက်နောက်ခံလူ နာသန်အကီကို ပေါင် ၄၁ သန်းဖြင့် ခေါ်ယူခဲ့ပြီဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အလာဘားဟာ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ကိစ္စကို ယခုအချိန်ထိ ရေရေရာရာ အဖြေမပေးသေးတာကြောင့် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကတော့ ရောင်းထုတ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ Telegraph...
FA ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကို ကစားဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ ပြောခဲ့သည့် ချယ်လ်ဆီးကစားသမား ပူလီဆစ်
ချယ်လ်ဆီးကစားသမား ပူလီဆစ်ဟာ အသေးစားဒဏ်ရာကြောင့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ FA ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကို လွဲချေ်ာခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးလ်နဲ့ ပွဲမှာလည်း လူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ်သာ ဝင်ရောက်ကစားခဲ့ရပေမယ့် နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ဝုဗ်နဲ့ ပွဲစဉ်ကိုတော့ ပွဲထွက်လူစာရင်းမှာ ပါဝင်ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ပူလီဆစ်ဟာ ရာနှုန်းပြည့်ကြံ့ခိုင်မှုအပြည့်ဖြင့် အာဆင်နယ်အသင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည့် FA ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်အတွက် အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ ESPN သတင်းဌာနနှင့် သီးသန့်အင်တာဗျူးရာမှာတော့ ပူလီဆစ်က “ကျွန်တော့်မှာ ကြီးကြီးမားမား ဒဏ်ရာပြသာနာမရှိပါဘူး။ ၁၀၀% ကြံ့ခိုင်မှု ပြည့်ဝနေပါပြီ ” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပူလီဆစ် ကစားနိုင်ခြင်းဟာ လမ်းပတ်အတွက် အားတက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ FA ဖလားကို (၈) ကြိမ်တိတိ ဆွတ်ခူးထားခဲ့သည့်အတွက် ယခုလာမည့် အာဆင်နယ်အသင်းနှင့် ဖိုင်နယ်ပွဲကိုလည်း အနိုင်ကစားကာ (၉) ကြိမ်မြောက်ဖလား ဆွတ်ခူးဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ရာသီကလည်း အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့...
Official : နယူးကာဆယ်အသင်းကို ဝယ်ယူတော့မှာမဟုတ်တဲ့ ဆော်ဒီအကျိုးတူစီးပွားရေးအုပ်စု
နယူးကာဆယ်အသင်းဟာ ရာသီမကုန်ခင်က ပိုင်ရှင်အပြောင်းအလဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီး သတင်းအကြီးအကျယ်ထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိနယူးကာဆယ်အသင်းပိုင်ရှင် မိုက်အက်ရှ်လေဟာ နယူးကာဆယ်အသင်းကို ပေါင်သန်း ၃၀၀ ဖြင့် ဆော်ဒီအကျိုးတူစီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုထံရောင်းချဖို့ မီးစိမ်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဆော်ဒီအကျိုးတူစီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုကိုတော့ ဆော်ဒီမင်းသာ ဘင်ဆယ်လ်မန်းက ကျောထောက်နောက်ခံပြုလုပ်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဆော်ဒီအကျိုးတူစီးပွားရေးအုပ်စုဟာ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ နယူးကာဆယ်အသင်းကို ဝယ်ယူမည့်ကိစ္စကို နောက်ဆုတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုတ်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ရပ်ကတော့ လက်ရှိပိုင်ရှင် မိုက်အက်ရှ်လေဟာ အသင်းရောင်းချမည့်ကိစ္စတွင် အတော်လေးကြန့်ကြာနေသလို၊ နောက်ရာသီမစခင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရမည့်ကိစ္စများကို အချိန်မမှီမှာစိုးရိမ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ ဆော်ဒီအကျိုးတူစီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုက ယခုလို ရေးသားကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ “နယူးကာဆယ်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ ကလပ်အသင်းကို လေးလေးနက်နက် တန်ဖိုးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အခုဆိုရင် နယူးကာဆယ်ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်းကို ဝယ်ယူမည့်ကိစ္စကို လက်လျော့လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါပြီ” “ကျွန်တော်တို့ အလွန်ပဲ ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကလပ်အသင်းကို ဝယ်ယူပြီးတော့ နယူးကာဆယ်မြို့ကြီးမှာ အများကြီး...
Reliable : သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မတိုင်ခင် ဆန်ချိုကို ယူနိုက်တက် ဂျာစီနဲ့ မြင်တွေ့ရဖို့ အတော်လေး နီးစပ်နေပါပြီ
ဂျေဒန်ဆန်ချိုရဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အပြောင်းအရွှေ့ဟာ တစစနှင့်နီးကပ်လို့လာခဲ့ပါပြီ။ ဒေါ့မွန်အသင်းဟာ ယူနိုက်တက်ဘက်မှ ကမ်းလှမ်းလာသည့် ကနဦးကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံတော့မည်ဟု သိရပါတယ်။ နှစ်ဖက်အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ဒီအပြောင်းအရွှေ့အတွက် ထိပ်တိုက် ဆွေးနွေးတာမျိုးမလုပ်ရသေးပဲ အေးဂျင့်မှတဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက်ဘက်က ပေါင်သန်း ၆၀ နဲ့ ကနဦးစတင်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး ဒေါ့မွန်ဘက်က လက်ခံဖို့ အတော်လေးနီးစပ်နေပြီလို့ သတင်းပေါက်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။ ဆန်ချိုအသင်းအတွက် ကနဦး ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်သန်း ၆၀ ဖြစ်သော်လည်း နောက်ပိုင်း add-ons များထည့်သွင်းလိုက်ပါက စုစုပေါင်း ပြောင်းရွှေ့ကြေးဟာ အနည်းဆုံး ပေါင်သန်း ၁၀၀ ရှိသွားမည်ဟု သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် add-on ကြေးတွေကို ဘယ်လိုပုံစံနဲပ ပေးချေသွားမယ်ဆိုတဲ့ ငွေပေးအစီအစဉ်ကိုတော့ အပြောင်းအရွှေ့အထမြောက်မသာ သိရမှာပါ။ ဒေါ့မွန်အသင်းဟာ ယူနိုက်တက်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ဆန်ချိုကို ရောင်းချဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်သလို၊ ဆန်ချိုနေရာ ပြန်လည်အစားထိုးဖို့အတွက် အပြောင်းအရွှေ့တွေကို လုပ်ရအုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။...
Breaking News : နယ်သာလန်နောက်ခံလူ နာသန်အကီကို ခေါ်ယူဖို့ ဘုန်းမောက်အသင်းနှင့် သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည့် မန်ချက်စတာစီးတီး
နောက်တန်းလိုအပ်ချက်ရှိနေသည့် မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဟာ ဘုန်းမောက်အသင်းရဲ့ အရည်အသွေးမြင့် နောက်ခံလူ နာသန်အကီကို ပေါင် ၄၁ သန်းဖြင့် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဘုန်းမောက်ကလည်း မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဘုန်းမောက်အသင်းဟာ တန်းဆင်းသွားပြီဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ၎င်းတို့ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ကစားသမားကောင်းများကို ရောင်းချဖို့ ရာသီမကုန်ခင်ကတည်းက ကြေငြာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အသက် (၂၅) နှစ်အရွယ် အကီဟာ ဖီယင်နော့၊ ချယ်လ်ဆီးအစရှိသည့် လူငယ်အကယ်ဒမီမှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ဖြစ်ပြီး ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာ ပွဲအနည်းငယ်သာ ကစားခဲ့ရပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှတဆင့် ရီဒင်း၊ ဝက်ဖို့ဒ် နှင့် ဘုန်းမောက်တို့တွင် ၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၇ အထိ အဌားသွားရောက်ကစားခဲ့ပြီး ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီမှာတော့ ဘုန်းမောက်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်သန်း ၂၀ နှင့်အတူ အပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဟာ ပြီးခဲ့သည့်ရာသီက အမှားကို သင်ခန်းစာယူပြီး ဗဟိုနောက်ခံလူနေရာကို မဖြစ်မနေ အင်အားဖြည့်တင်းဖို့...
ယခုတပတ်အတွင်းမှာပင် အဌားချမည့် ကစားသမားစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာသွားမည့် #ဆိုးလ်ရှား
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားဟာ ယခုတပတ်အတွင်းမှာပင် အဌားချမည့် လူငယ်ကစားသမားစာရင်းကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချကာ ကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ လာမည့်ရာသီမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရရှိသည့်အတွက်ကြောင့် ဆိုးလ်ရှားဟာ အသင်းကို အင်အားတောင့်တင်းအောင် လုပ်ဖို့လိုအပ်သလို၊ တခြားပြိုင်ပွဲတွေလည်း ရှိနေသေးသည့်အတွက်ကြောင့် သေချာစဉ်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေကိုအဌားချရခြင်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ၎င်းတို့ရဲ့ ခြေစွမ်းပိုင်းတိုးတက်လာအပြင် အသစ်ရောက်လာသည့် ကစားသမားသစ်များကြောင့် အလားလာရှိသည့် လူငယ်များအနေဖြင့် ကစားခွင့်မရပဲ အခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါကို အဌားချမယ်ဆိုတာကို မသိရသေးပေမယ့် အသင်းကြီးနှင့် ထရိန်နင်းဆင်းနေသည့် တီဒန်မန်ဂီကိုတော့ အသင်းမှာထားဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများနေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အကယ်ဒမီဟာ နောက်ပိုင်းအရည်အသွေးပြည့်မှီသော ကစားသမားလူငယ်လေးတွေကို မွေးထုတ်ပေးလာနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မေဆွန်ဂရင်းဝုဒ်လို ပါရမီရှင် လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကို အသင်းကြီးမှာ အသင့်သုံးဖြစ်အောင် မွေးထုတ်ပေးလိုက်တာကတော့ လက်တွေ့ပါပဲ။ နောက်ရာသီမှာ အဌားထွက်ကစားရနိုင်တဲ့ ကစားသမားစာရင်း အကြမ်းဖျင်းကို Daily mail က အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ၁) ဂျိမ်းဂါနာ...
အိုးထရက်ဖို့ဒ်ကို ကျောခိုင်းစွန့်ခွာဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပြီဟု သတင်းများထွက်ပေါ်လာသည့် #ဆန်းချက်ဇ်
အင်တာမီလန်အသင်းမှာ တစ်ရာသီအဌားဖြင့် သွားရောက်ကစားလျက်ရှိသည့် ယူနိုက်တက်ကစားသမား ဆန်းချက်ဇ်ဟာ ရာသီအကုန်မှာ အိုးထရက်ဖို့ဒ်ကို ပြန်လာဖို့ ဆန္ဒမရှိပဲ အသင်းပြောင်းဖို့ နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားထံ တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ သတင်းများပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှားကတော့ ဆန်းချက်ဇ်ကို ရောင်းချဖို့ထက် အီတလီမြေက ရခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး နောက်ရာသီမှာ နေရာတစ်နေရာပေးဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ ဆန်းချက်ဇ်ဟာ အင်တာမီလန်အသင်းကို စစရောက်ချင်း ခဏသာ ကစားခဲ့ရပြီး ဒဏ်ရာပြသာနာကြောင့် အောက်တိုဘာလအလယ်မှ ဇန်နဝါရီလအစထိ ရက်ပေါင်း (၈၃) ရက်ကြာ အနားယူခဲ့ရပါတယ်။ ဒဏ်ရာကြောင့်ပင် အင်တာမီလန်အသင်းကစားခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံစုစုပေါင်း (၁၄) ပွဲလောက်ကို လက်လွှတ်လိုက်ရပါတယ်။ အင်တာမီလန်အသင်းကလည်း ဆန်းချက်ဇ်ကို ဒဏ်ရာကြောင့် စိတ်ပျက်ခဲ့ပြီး အဌားစာချုပ်ဖျက်သိမ်းဖို့အထိကို စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒဏ်ရာမှ ပြန်လည်သက်သာလာပြီးနောက်ပိုင်း အသင်းရဲ့ ပွဲစဉ်တချို့ကို ပြန်လည်ပါဝင်လာနိုင်ပြီး ဂိုးတွေသွင်းယူလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုဆိုရင် နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ (၉) ပွဲဆက်တိုက်မှာ ဆန်းချက်ဇ်ဟာ...
ချယ်လ်ဆီးနဲ့ လမ်းခွဲတော့မယ့် ဝီလီယံ ဘယ်အသင်းကို ပြောင်းမှာလဲ ?
ချယ်လ်ဆီးအသင်းဝါရင့်ကစားသမား ဝီလီယံဟာ ယခုရာသီအကုန်မှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို စွန့်ခွာသွားဖို့ သေချာသလောက်ရှိနေပြီး အသင်းပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသက် (၃၁) နှစ်အရွယ် ဝီလီယံဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီကတည်းက ရုရှားကလပ် အန်ဇီးအသင်းမှ ပေါင်သန်း (၃၀) ဖြင့် ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဝီလီယံ၏ အေးဂျင်ဖြစ်သူ ဂျိုရက်ချီယန်က သူ၏ကစားသမား ဝီလီယံဟာ ရာသီအကုန်မှာ စတမ်းဖို့ဘရစ်ချ်နှင့် လမ်းခွဲတော့မည်ဟု သေချာပေါက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဝီလီယံကို ခေါ်ယူချင်လို့ စုံစမ်းတဲအသင်း (၅) သင်းအထိ ရှိနေတယ်လို့တပါတည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသော်လည်း၊ ပရီးမီးယားလိဂ်က (၂) သင်း၊ ဥရောပက (၂) သင်းနှင့် မေဂျာလိဂ်က တစ်သင်းဖြစ်တယ်လို့ အရိပ်အမြွက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ “ပရီးမီးယားလိဂ် ၂ သင်းကတော့ သူ့ကို ခေါ်ယူချင်လို့ တိတိပပ ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် MLS (မေဂျာလိဂ်)က အသင်းကလည်း သူ့ကို လိုချင်နေတယ်။ မေဂျာလိဂ်က...